Kukhishwe amagama eziboshwa ezifunwa uthuli
ZIFUNWA uthuli ngamaphoyisa iziboshwa ezingu-16 ezeqile ngesikhathi iloli yamaphoyisa ethwala iziboshwa ivinjwa ngamadoda amahlanu abehlome ngezibhamu eMgungundlovu, ngoLwesithathu ekuseni.
Simphiwe Ngubane | April 30, 2021
Lezi ziboshwa bezisuka ejele iNew Prison ziyiswa eNkantolo yeMantshi eMgungundlovu, zavinjezelwa emgwaqweni uDevonshire, e-Edendale.
Ziwu-45 sezizonke iziboshwa ebezilayishwe yiloli ebinamaphoyisa amabili. Kweqe iziboshwa ezingu-31.
Kuthiwa ezinye iziboshwa ziqhubekile zahlala kuleli loli ngemva kokuthi abaphangi belivulile ngodlawu olunqamula izinsimbi, kwakhona ezibalekayo.
Kukhona nezinye okuthiwa zizinikele ngokwazo eziteshini zamaphoyisa ezahlukene kwathi ezinye zatholwa ngamaphoyisa enkabeni yedolobha eMgungundlovu.
Amaphoyisa agcine ekwaze ukubuyisela ezitokisini iziboshwa ezingu-29 kulezi ezingu 45 ebezihanjiswa enkantolo.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uBrigadier Jay Naicker, uthe bobabili ozakwabo bathole imihuzukwana ngesikhathi iloli lishayisa unqenqema lomgwaqo ngenkathi imiswa ngabaphangi abebebakhombe ngezibhamu.
“Kuyaqhubeka ukuthungathwa kweziboshwa ebezitokile ezingu-16 ezeqile. Kunenhlanganisela yethimba lamaphoyisa eliyisipesheli elijutshwe ukuba lithungathe lezi ziboshwa ezigcwele amathafa,” kusho uNaicker.
Uthe la maphoyisa azozithungatha zonke lezi ziboshwa futhi anikwe nezinsiza ezanele zokwenza lo msebenzi.
UKhomishana wamaPhoyisa KwaZulu-Natal, uLieutenant Nhlanhla Mkhwanazi, uzifikele ngokwakhe endaweni yesehlakalo wanika imininingwane ngabaholi bamaphoyisa eMgungundlovu nabesifundazwe.
“Nakuba sigxile kakhulu ekuthungatheni iziboshwa ezeqile kodwa isehlakalo sokweqa siphenywa nxa zonke. Siphenywa njengecala lobugebengu futhi siyaphenywa ngaphakathi embuthweni wamaphoyisa,” kusho uLt Gen Mkhwanazi.
Iziboshwa ezifunwayo oMnuz Siphelele Chamane (28), Mbukiseni Ndlovu (38), Mpho Phalo (31), Mphali Khanyiso Kou (30), Thubelihle Dlomo (19) ababekwe amacala okubulala. OMnuz Fonane Paulo Pone (31), Frank Lutchman (23) noGeorge Paul (29) babekwe awukuba kuleli ngokungemthetho. UMnuz Sphelele Ntsuntsu Mkhize (35), Kabelo Mtisilwane (27), Wiseman Shezi (26) ababhekene namacala okuphanga. UMnuz Mlungisi Mncwabe (43) uthweswe elokuzama ukubulala, kuthi uMnuz Talent Mncube (19) ubekwe elokushaya ngenhloso yokulimaza, uMnuz Skhumbuzo Ngcobo (36) elokweba imoto, uMnuz Sbonelo Bhengu (31) wabekwa elokucekela phansi impahla, kwathi uMnuz Mlungisi Caster Ndlovu (25) ubhekene necala lokweba.
Ingqapheli yodlame, uNkk Mary de Haas, ugxeke inkululeko yeziboshwa eziphatha amaselula zixhumane nabantu abangekho ejele.
Uthe okubi ngalesi sehlakalo ukuthi kuthunjwe amaphoyisa okuyibona bantu abathenjiwe ukuthi bavikele izakhamuzi.
“Lesi sigameko sikhombisa ngokusobala ukuthi kuqale kwanokuxhumana phakathi kweziboshwa namadoda abehlomile ahlasele amaphoyisa. Lokhu kwenziwa nawukuthi kugcwele amaselula emajele okuyinto okungamele engabe iyenzeka,” kusho uNkk De Haas.
Ufuna kube nekhomishini ezimele ezophenya indlela okuphethwe ngayo amajele kuleli.
Ugxeke ezobunhloli athe zibuthuntu futhi zikhungethwe yizinkinga. Uthe kukhona asebephendule ezobunhloli ithuluzi labo abalwa ngalo izimpi zepolitiki.
“Maningi amaphoyisa asebenza ngobuqotho nangokuzikhandla kuhlanganisa nalawo akwezobunhloli. Umsebenzi wawo udicilelwa phansi ilawo ayizigebngu. Ukweqa kwalezi ziboshwa ngale ndlela kuyizimpawu zokuthi sekuyikamachanca eNingizimu Afrika,” kusho uNkk De Haas.